Dowladda soomaaliya oo xirtay garoonka Beledweyne.
Dowladda Faderaalka Soomaaliya ayaa si kumeel gaar ah u xirtay garoonka Ugaas Khaliif ee magaaladda Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Xiritaankan ayaa yimid kadib markii talaadadii ay ku soo dhacday diyaarad xamuulka qaada oo sahay u siday Ciidanka AMISOM ee gobolka Hiiraan.
Wasiirka Duulista Hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar iyo wafti xaqiiqo raadin ah oo shalay booqday garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ayaa la kulmay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka garoonka diyaaradaha iyo saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM.
Agaasimaha Duulista Rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo ka mid ahaa wafdiga booqday garoonka diyaarada Ugaas Khaliif ayaa sheegay in garoonka Baladweyne uu sii xirnaa doono in muddl ah si baaritaan looga sameeyo waxa sababay burburka diyaarada isla markaana loo nadiifiyo burburka diyaarada.
Diyaaraddii ku burburtay garoonka Beledweyn ayaa la sheegay inuu sababay burburkeeda kadib markii duuliyaha diyaarada uu arkay dameer ku jooga jidkii ay ku degi lahayd.
« Madaxweyne Farmaajo iyo Madax kale oo ka qeyb galay salaada janaasada R/W Hore ee dalka.
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Somaliya oo ka degtay Dhuusamareeb. »